Fanafihana antoandrobenanahary teny Nanisana: nirefotra ny basy, Cash-point iray indray no voatafika | NewsMada
1 900 000 Ar. Io no totalin’ny vola voaroban’ny andian-jiolahy iray, nanafika Cash-point iray teny Nanisana, omaly. Nirefodrefotra ny basy. Fanafihana antoandrobenanahary. Mandrovi-tsihy tokoa ny jiolahy, tato ho ato.
Miverina indray ny fanafihana Cash point. Lasibatry ny jiolahy miisa roa tsy nisaron-tava, omaly atoandro tokony ho tamin’ny 12 ora sy sasany ny Cash point iray etsy Nanisana. Vokany, lasan’ireo lehilahy roa ny vola mitentina 1.900.000Ar. Raha ny fitantaran’ireo nanatri-maso, niditra an-keriny tao amin’io toerana io ireo jiolahy roa nirongo basy. Nampihorohoro sady nanapoaka basy indroa izy ireo nanery ireo tompon-toerana hanome ny vola rehetra tao aminy. « Rehefa azony ireo vola notadiaviny, lasa nandositra izy ireo », hoy ny polisim-pirenena, loharanom-baovao. Teo am-pandosirana, mbola nanapoaka basy indray koa ireo olon-dratsy, hoy hatrany ny fanazavana voaray. Vokany, voatifitra teo amin’ny tendany tamin’izany ny lehilahy mpanjifa iray ka naratra mafy, hoy ny loharanom-baovao iray. Ity farany izay saika handeha tao amin’ilay Cash point tamin’io fotoana io.
« Efa nisy lehilahy roa hafa nitondra moto scooter niandry azy ireo, tsy lavitra teo », hoy ny filazan’ny manodidina teny an-toerana, omaly. Taorian’izay, nihazo an’Ampasapito ny lalan’izy ireo, hoy hatrany ireo mponina teny an-toerana. Ny iray amin’ireo jiolahy no fantatra fa nisaron-tava, hoy ny polisy. Fotoana fohy taorian’izay, tonga teny Nanisana ireo polisy avy ao amin’ny kaomisarian’Analamahitsy sy ny UIR, nijery ny zava-nisy. Nisy koa ny fanaovana “ratisage” manerana ny kaomisarian’ny renivohitra. Nanao ny fanakanan-dalana teo amin’ny sampanan-dalana hihazo an’Ampasapito koa ny polisy ary nisava ireo moto rehetra avy any Nanisana. Tsy tratra anefa ireo jiolahy fa mety efa tafaporitsaka mialohan’ireo sakana nataon’ny polisy, hoy ny loharanom-baovao iray.
Tsy vao izao no nitrangana fanafihana teny amin’ny faritra Nanisana. Lasibatry ny asan-jiolahy matetika ireo tompona ny Cash point manerana ny Renivohitra ankehitriny. Tsiahivina fa vao herinandro vitsy izay, mpanao Cash point iray eny Ampefiloha koa, lasibatry ny jiolahy izay nahaverezana vola antrapitrisany.